Trabzona Cable Car Na-abịa
HomeTurkeyBlack Sea Region61 TrabzonTrabzona Cable Car Na-abịa
18 / 03 / 2013 61 Trabzon, General, TELPHER
N'ime ọtụtụ njem njem na-eme njem na Trabzon, Sümela Monastery na Uzungöl ụgbọ ala a ga-eme, ọ bụ iji gbasaa ebe ndị njem nleta.
Ọ bụ onyeisi oche nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na United Arab Emirates. Site na Necdet Kerem na Trabzon businessman Şükrü Fettahoğlu na 15 October 2012, Uzungöl Teleferik Ụlọ ọrụ na-eme njem nleta na Energy Energy na Ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-aga n'ihu na-eme mgbalị 2 puku 403 mita na obodo Uzungöl jikọtara na district nke Çaykara nke Trabzon.
Otu ụlọ ọrụ, nke bụ Turkey si otu n'ime ihe ndị kasị mkpa emmepe na usoro nke okwukwe njem, Macka emi odude a dị n'elu ugwu na Montenegro uwe mwụda na Altındere Valley na district na 88 afọ mgbe e mesịrị kwere maka ememe na mbụ 15 August 2010 na Sumela Obibi na-arụ ọrụ na nhazi nke ihe ruru.
Gọvanọ Trabzon Recep Kizilcik, akụkọ ihe mere eme Trabzon na usoro dị mkpa, yana obodo na-ebute ọdịmma nke okike ya, ọnụ ọgụgụ ndị njem na-abịa n'ihi atụmatụ ndị a na-abawanye kwa afọ, o kwuru.
2 nde 550 puku ndị njem na ndị si mba ọzọ bịara leta obodo ahụ na afọ gara aga, na-egosi na Gọvanọ Cranberry, "Anyị na-aga n'ihu na mbọ anyị iji bulite ọnụ ọgụgụ a. Anyị na-arụ ọrụ dị iche iche iji tụlee ụdị njem ọ bụla na Trabzon. Ọdịnala, ọdịbendị, ọdịdị, njem ọgbakọ na ihe omume dị iche iche anyị na-eme atụmatụ ịtụte, ”ka o kwuru.
Ụgbọala Carble na Trabzon
Ụgbọ ise ụgbọala dị iche iche ise na Trabzon
Kedu mgbe ụgbọ okporo ígwè na Trabzona ga-abịa?
Trabzon kwesịrị ijikọta na okporo ígwè okporo ígwè Turkish
Erzincan-Trabzon okporo ụzọ na-eweta New Port ka Trabzon
Mgbasa nke Trabzon na Nsogbu Nsogbu
Ropeways na-ewu na Trabzon adịghị emerụ ibe
Ọdịnala Adabeghị na Transportgbọ njem Ọha na Trabzon…
Ebee ka ọdụ ụgbọ okporo ígwè dị na Trabzon kwesịrị
Ụgbọ njem ndị mmadụ na Trabzon
Nnweta ohere na YKS na Trabzon
Ụgbọ Ala Ọhụrụ
T1 Tram Expeditions Na Bursa 3 na-amalite mgbe ọnwa
BURULAŞ kwesịrị ịbụ ihe atụ maka ụlọ ọrụ obodo (Foto Foto)